မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လုပ်မယ်လို့ ထရမ့်ပြော
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လုပ်မယ်...
2 มิ.ย. 2561 - 08:38 น.
စင်္ကာပူ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲဟာ တယောက်အကြောင်း တယောက် နားလည်အောင် လုပ်ရမယ့်ပွဲလို့ ထရမ့်ပြော
အမေရိကန် သမ္မတ ထရမ့်က သူ့ဘက်က ဖျက်လိုက်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ် ဂျုန်အွန်းနဲ့ နျူကလီးယား အရေး ထိပ်သီးညီလာခံကို နဂို စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြတုန်းက မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ် ဂျုန်အွန်းနဲ့ သမ္မတ ထရမ့်တို့ တဦးနဲ့ တဦး နစ်နစ်နာနာ ဒေါသတကြီး အပြန်အလှန်တွေ တိုက်ခိုက် ပြောဆိုနေကြရင်း ဆက်ဆံရေး ရုတ်တရက်ကြီး ကောင်းလာပြီး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တော့မယ်လို့ ကြေညာ၊ တခါ ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို သမ္မတထရမ့်ဘက်က ဖျက်လိုက်ပြီလို့ ပြောထားရာကနေ အခုတော့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို နဂို စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ပြန်လုပ်တော့မယ် ဆိုပြီး သမ္မတ ထရမ့်က ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တာပါ။
ဒီထိပ်သီးညီလာခံဟာ တယောက်အကြောင်း တယောက်သိကြရအောင် လုပ်မယ့် ပွဲတခု ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတ ထရမ့်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့မတိုင်ခင်မှာတော့ သမ္မတ ထရမ့်ဟာ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ကင်မ်ယန်ချိုးနဲ့ အိမ်ဖြူတော်မှာ တနာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်မ်ယန်ချိုးဟာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက်ခ် ပွန်ပီယိုနဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကတည်းက ဆိုရင် အိမ်ဖြူတော်ကို လာရောက်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် တွေထဲမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ ထရမ့်အတွက် ကင်မ်ဂျုန်အွန်းဆီက စာကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ကင်မ်ယန်ချိုး ယူလာပေး
သူနဲ့အတူ သမ္မတ ထရမ့်အတွက် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ် ဂျုန်အွန်း ရေးပေးလိုက်တဲ့ စာ ပါလာပါတယ်။ အခုထိတော့ ဒီစာကို ဖွင့်မဖတ်ရသေးဘူးလို့ သမ္မတ ထရမ့်က ပြောပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့ ထိပ်သီး ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးပြောဆိုမယ့် ကိစ္စရပ်တွေထဲမှာ ကိုရီးယား စစ်ပွဲ အဆုံးသတ်ရေး ကိစ္စဟာလည်း တခု အပါအဝင် ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတ ထရမ့်က ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ့ဆုံ
သမ္မတ ထရမ့်နဲ့ ကင်မ်ဂျုန်အွန်းတို့ရဲ့ သမိုင်းဝင် တွေ့ဆုံပွဲဟာ အမေရိကန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ပထမဆုံးအကြိမ် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကသာ နျူကလီးယား လက်နက် ဖျက်သိမ်းမယ် ဆိုရင် မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ စီးပွားရေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမှာ အကူအညီပေးမယ် ဆိုပြီး သမ္မတ ထရမ့်က ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
ကင်မ်ဂျုန်အွန်းဘက်ကလည်း နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေးကို ပုံစံတချို့နဲ့ လုပ်ပါ့မယ်လို့ ကတိပြုထားပေမယ့် သူ့ဘက်က ဘာတွေ တောင်းဆိုသလဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီညီလာခံကနေ အဆုံးသတ် သဘောတူချက်တခု ရနိုင်မယ့်ပုံ မရှိဘူးဆိုတာကို သမ္မတ ထရမ့်ကလည်း သတိပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီညီလာခံဟာ တကြိမ်ထဲနဲ့ ပြီးသွားမယ့် ညီလာခံမျိုး မဟုတ်ပဲ လုပ်ငန်းစဉ်တခု အနေနဲ့ ဆက်တိုက် လုပ်သွားဖို့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်မယ့် အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ သဘော ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတ ထရမ့်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လုပ်မယ်လို့ ထရမ့်ပြော